UMTHANDAZO OYA KUMNTWANA UYESU WOKULUNGELELA IIMVIWO ZOKUGQibela
Kweli nqaku limnandi kwi Umthandazo usana olunguYesu ukusuka ePrague kwiimviwo, Siyavuya ukunika abafundi iintlobo ngeentlobo zezicelo kule ngcwele ingummangaliso yokuncediswa xa bethatha iimviwo zabo.
1 Umthandazo kuYesu osesePrague kwiimviwo
1.1 Isivakalisi esifutshane
1.2 Isivakalisi eside
1.3 Esinye isigwebo esinamandla sokugqibela
1.3.1 Uqeqesho nokuthobela phambi koThixo
1.3.2 Ngubani uYesu osana lwasePrague?
Umthandazo kuYesu osesePrague kwiimviwo
Umntwana oNgcwele uYesu wasePrague, ngumfanekiso ophilayo omela uYesu Krestu ebuntwaneni bakhe, wenziwe nge-wax nguFray José. U-Yesu omncinci wamcela ukuba ambonise ngomfanekiso owawufana naye, nangokubonakala ukuba uphumle ePrague.
Abafundi banokucela uncedo lukaThixo ukuba bafezekise amabakala aphezulu xa besenza iimviwo, lukhetho olusempilweni oluya kusebenza njengegalelo eliphambili, kwiimeko ezinzima zokufunda.
Kukho imithandazo emide nemifutshane eyenziwayo ukubongoza usana olunguPrague, kwaye lubonise iziphumo ezintle xa usenza iimviwo zokugqibela kuwo nawuphi na umxholo.
"Nina Bantwana banobubele kwaye banaphakade uYesu wase Prada."
"Nguwe okhusela inkqubela phambili."
"Uqeqesho kunye nokukhuselwa kwabo bonke abafundi."
"Wena ohlala nathi abafundi."
"Ngawo onke amaxesha obomi bethu."
"Ukuqinisekisa nokuqinisekisa ukuba siyaphambuka."
"Ukusuka kwiindlela zethu ukuya kwiindlela ezingalunganga"
"Kodwa kumendo wolwazi."
"Wena ohlala usenza konke okusemandleni ukuze sifumane."
"Ulwazi oluncedo olusivumela yonke imihla."
"Yibani ngabantu abalungileyo."
"Ngazo zonke ezi zizathu kwaye zininzi."
"Ndizolile ebusweni bakho kwaye".
"Ndiphakamisa imithandazo yam phambi komfanekiso wakho."
"Ukukubongoza, ndikhokele ngesandla sakho kwiindlela zobulumko."
"Ngamana ukukhanya kwakho kungandikhanyisa ukuze ndikwazi ukoyisa."
"Yonke imiqobo enqamlezileyo kwinqanaba lam lemfundo."
Ukuba uyifumene le post malunga Umthandazo kwiNtsana uYesu wasePrague kwiimviwoSiyakumema ukuba ufunde inqaku lethu: Indlela yokuthandaza kwiwaka lamaYesu?.
"Owu usana olungummangaliso uYesu wasePrague!"
Umthombo wayo yonke inzululwazi nobulumko ”.
"Esifumana kuye ubukrelekrele."
"Oko kuvela kukulunga kwakho okungenasiphelo kunye nenceba."
"Ngamehlo akho anobubele jonga umzabalazo wam kunye nexhala lam."
"Ubunzima bezifundo zam kunye neemviwo, kunye nothando onalo kum."
"Ndincede emsebenzini wam ukuze ndibulele ngezibonelelo zakho."
"Uthando lwam ngawe lukhula yonke imihla."
"Kwaye ndikuhloniphe kwaye sikubeka ngembeko enkulu."
"Zihlonipha ntoni iiNgelosi kunye nabaNgcwele ezulwini?"
"Kwaye iintliziyo zamalungisa emhlabeni."
"Olona sana luthandekayo uYesu wasePrague."
"Wena ungumkhuseli okhethekileyo wabafundi."
"Ndincede kule mihla inzima yeemviwo."
“Ngokukodwa kule ndiza kuyithandaza:
(Chaza umxholo woviwo) ”.
"Phambi kwakho ndibeka ithemba lam lonke."
"Unokwenza yonke into kuba amandla akho makhulu."
"Kwaye ndiyazi ukuba awundilahli ngenxa yokuba ungcwele."
"Iintsana ezingcwele zikaYesu zasePrague, ezihlonelwayo nezithandwayo"
"Wena owayeneminyaka elishumi elinesibini etempileni, ubusazi."
"Phendula ngobulumko obuncomekayo koogqirha boMthetho."
"Oko bakubuzile, khanyisa ingqondo yam, ukuze ndifunde."
"Kwaye inkumbulo yam iyanda, ukuze ndikugcine oko ndikufundayo."
"Ndiphe ukuzola, ukuze ndingenzi iimpazamo, ndinike ukuzola"
"Ukuze ndikwazi ukubhala endikufundileyo, ndinike ingcaciso ukuze".
"Qonda kakuhle imibuzo kunye nobulumko ukuphendula."
"Kulungile, ndincede ndifumane amabakala amahle."
"Bayangenelela ukuze ootitshala abaza kundiphonononga balungile."
"Yiba novelwano ngokusilela kwam, kwaye ndingaphumelela."
"Kwaye ufumane awona manqanaba aphezulu kwizifundo ze (zibize amagama)."
Esinye isigwebo esinamandla sokugqibela
"Umthombo wokucela kaThixo kubo bonke ubulumko."
"Kwaye kumandla asezulwini apho sifumana khona ulwazi."
"Kukhuthazwe ngesisa sakho esingcwele nesingenamda."
"Ndiyakucela ngothando lwam lonke nangentliziyo emsulwa leyo".
"Ngokhathalelo ondinika lona, ​​ndincede kwezi ntsuku zilandelayo."
"Ndisebenzise ithuba lolwazi olufunyenweyo kwaye".
"Ndaphuma kakuhle kwaye ndizele ukufunda kwizifundo zam."
"Namhlanje ndiyazingcwalisa phambi kwakho ndiqinisekile ukuba uya kundikhanyisela."
"Kwinyathelo ngalinye endilithathayo kuqeqesho lwam lwezifundo."
Ngayo nayiphi na imithandazo efundwe kuMntwana oyiNgcwele uYesu wasePrague, kufuneka iqukunjelwe ngokuthandaza kunye neCreed, uBawo wethu, Yibonge uMariya kunye noZuko.
Le mithandazo kufuneka yenziwe ngaphambi kokunikezelwa kweemviwo, iimvavanyo okanye xa umfundi esiva isidingo, eyona nto ibalulekileyo lukholo olumiselweyo.
Uqeqesho nokuthobela phambi koThixo
Umba ofanelekileyo ongafanele ukutyeshelwa ukufezekisa iinjongo zethu kunye neenjongo zethu ngexesha lokuphila kukuhlala unyamezelo, uqeqesho, ubukrelekrele, ubulumko, ukuthatha isigqibo kunye nokuthobela.
Masikhumbule ukuba ukholo kunye nethemba elibekwe kuThixo uBawo wethu wasezulwini, osoloko ejonge kwaye efuna okona kulungileyo kubantwana bakhe, ke, ngokusekwe kulo mthetho-siseko, siyancedisana kule nkalo ibalaseleyo izakusinceda kwaye isincede ekukhuleni komntu.
Kuya kufuneka kugxile kubushushu kunye nentembelo yokuba usana olungcwele lukaYesu lwasePrague luya kusinceda xa simcela ukuba asinike inkxaso yokuqhubela phambili ngamabanga aphezulu ekunikezelweni kovavanyo okanye kwiimviwo zezifundo, nakwezinye iinkalo ubomi obunokuthi ngesizathu esithile bube yinto engenakwenzeka.
Ngubani uYesu osana lwasePrague?
Iintsana ezingcwele zikaYesu zasePrague, ngumfanekiso ongcwele owenziwe ngomthwebezo womfanekiso ophilayo kaYesu uqobo ebuntwaneni bakhe, ikhuselekile kwiCawa yaseSanta María de la Victoria naseSan Antonio de Padua, kwisixeko sasePrague, Umphakathi waseCzech.
Imbali ithi umfanekiso woMntwana oyiNgcwele wasePrague wawukade ungokaSanta Teresa kaYesu, uchazwa njengomntu ongummangaliso.
Ibali lithi umfanekiso wawukrolwe eSpain ngekhulu le-XNUMX, kwaye yahanjiswa isuka kubazali yaya kubantwana abangamakhwenkwe abalusapho, ngakumbi phakathi kwe-Count of Treviño kunye neeDukes zaseNájera.
Umthendeleko woMntwana oyiNgcwele wasePrague, uhlala ubhiyozelwa ngeCawe yokuqala kaJuni, kwaye umfanekiso wakhe unqulwa kwindawo entle enethoni yegolide, ebekwe kwiCawe leNenekazi Lethu Loyiso kunye no-Saint Anthony wasePadua.